Wasiir ka tirsan Jubbaland oo shaqo joojin lagu sameeyay | Keydmedia
Wasiir ka tirsan Jubbaland oo shaqo joojin lagu sameeyay
Wasiirka ayaa lagu eedeeyay wax is daba marin iyo ku takrifal awoodeed, kaas oo aan waafaqsaneyn nidaamka maaliyadda maamulka Jubbaland sida lagu sheegay wareegtada ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku xigeenka maamulkaas Maxamuud Sayid Aadan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland ayaa shaqadii looga joojiyay Wasiirka Wasaaradda Xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee Maxamed Xasan Maxamed.
Sidoo kale Wasiirka ayaa la sheegay in baaritaan lagu sameynayo eedaha loo soo jeediyay, waxaana lagu amray in inta uu socdo baaritaanka uu shaqadiisa maalinlaha ee xafiiskiisa uu joojiyo.
Tallaabadaan uu qaaday madaxweyne ku xigeenka maamulkaas ayaan horey looga baran maamulka Jubbaland, balse hoggaamiyaha maamulkaas ee Axmed Madoobe ayaa dhawaan ku guuleystay dhismaha iyo qalabeynta dhammaan xarumaha Wasaaradaha maamulkaas.
Maamulka Jubbaland ayaa ah maamul ku tiirsan dhaqaalaha canshuuraha ka soo xaroodo dekadda Kismaayo iyo Ganacstada, waxaana intaas u sii dheer kaalmaha deeqaha ah ee dhinaca dowladda Soomaaliya.